Cunug Yar Oo Shiinaha U Dhashay Ayaa Qabsaday Baraha Bulshada Kadib Arin Cajiib Uu Sameeyey | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Cunug Yar Oo Shiinaha U Dhashay Ayaa Qabsaday Baraha Bulshada Kadib Arin Cajiib Uu Sameeyey
Sawirka ilmayar oo Chineseah oo timihiisu baraf noqdeen qobowga jira awgeed ayaa dadbadan cajab gelisay dhibaatada uu ilmahaa yari u dulqaadanayo si uu u gaaro hadafkiisa waxbarasho.
Sida ay qortay “Sky News” canugan yar oo da’diisu tahay 8 jir ayaa marka uu iskuulka aadayo waxa uu soo jaraa masaafo gaareysa 4.5KM maalintii si uu iskuulkiisa u gaaro oo ku yaalla gobolka Yunnan, iyadoo heer kulku uu Ebar ka hooseeyo 90C.
Ilmahan yar oo la yiraahdo Wang Foman ayaa aabihii waxa uu ka shaqeeyaa magaalo ka fog guriga ay qoysku dagan yihiin, waxaana uu la noolyahay ayaydii iyo walaashii oo iyagu koriya.
Dadka sawirkan ka falceliyay ayaa ku tilmaamay canugan yar inuu yahay mid u halgamaya sidii uu waxbarasho ku heli lahaa, maadaama qabowga jira aanuu u diidin inuu iskuulka aado waxbarashadiisana uu sii wato, halka caruur badan oo fursado ka fiican heli karaa aaney dadaalkii loo baahnaa ku bixin sidii ay waxbarashada uga miro dhalin lahaayeen.
Dhanka kale, foman waxa uu sheegay in qobowga uu dareemo marka uu iskuulka u socdo, laakiin arrintu aanay sidaa u sii dhib badnayn, waxa uu tilmaamay inuu ku riyoonayo sidii uu maalin un ku booqan lahaa caasimadda Beijing.
Waxa uu intaa sii raaciyay mustaqbalka inuu doonayo inuu noqdo sarkaal ciidan ah, si uu gacanta ugu dhigo dadka xun, waa sida uu hadalka u dhigaye.